कहाँ अड्कियो मूलपानी क्रिकेट मैदानको फाइल ? | Cricket Himalaya |
कहाँ अड्कियो मूलपानी क्रिकेट मैदानको फाइल ?
By Bhanu Sigdel On Jul 20, 2018 214 0
फोटो : बाह्रखरीडटकम देखी ।
साउन ४, क्रिकेट हिमालय
गएको मार्चमा नेपाली क्रिकेट टिमले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएसँगै देशभर क्रिकेटको विकासका लागि आवाज गुञ्जियो । त्यही समयमा ५ वर्षका लागि देशले नयाँ सरकार पायो । सरकार गठन हुने प्रक्रियासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाए जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले । विश्वकर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय मूलपानी क्रिकेट मैदानको निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री विश्वकर्माले चैत १२ गते मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीले १ महिनाभित्रमा जग्गा विवादको समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता दिन पनि भ्याए । तर, मन्त्री विश्वकर्माले भनेको १ महिना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यता, मन्त्री विश्वकर्माले मूलपानी क्रिकेट मैदानको विवादित फाइल मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि नै पठाइसकेको बताएका छन् । “मैले मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवादसम्बन्धी फाइल आवश्यक अध्ययनका लागि प्रतिज्ञा गरेको समयभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हुँ,” मन्त्री विश्वकर्माले भने । यो खबर हामीले बाह्रखरीडटकम देखी लिएका हौ । पुरा खबर पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मूलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गा विवादसँगै अन्य विवाद पनि छन् । तर, जग्गा विवाद समाधान हुनसके मैदानको काम अगाडि बढ्नसक्छ । मूलपानीमा जग्गा विवादसँगै छेउछाउमा रहेका सुकुम्बासी समस्याले पनि मैदानको काममा बाधा पुर्याएको छ । त्यसो त मूलपानी मैदानको मुख्य समस्या मैदानको पश्चिम छेउको ५२ आना जग्गा नै हो । उक्त जग्गा घरधनीले सरकारसँग पैसाभन्दा पनि जग्गाको बदला जग्गा नै पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । “मेरो ३५ लाख डुब्यो । सुरुमा हामीले जग्गा किन्दा कसैले केही भनेन, जग्गा किनेपछि आएर यहाँको डाँडा सम्याएर मैदान बनाइयो र त्यसमा हामीलाई पनि राखिएछ । अब हामी कहाँ गएर बस्नू ? ६५ वर्षीय जग्गाधनी दुवनाथ तिमिल्सिनाको गुनासो छ, “हामीले जग्गा छाड्दैनौं भनेका छैनौं तर, हाम्रो कुनै व्यवस्था नगरी बेवारिसे अवस्थामा भने हामी ज्यान जाला छाड्दैनौं ।” उनले सरकारसँग जग्गा मागे पनि ढिला गरेको आरोप लगाए ।
मुख्य समस्या ५२ आना जग्गा विवाद
पहिलो चरणको ठेक्काको काम समाप्त भए पनि निर्माण कार्य सुरु भएदेखि ५२ आना जग्गा विवादले अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन । सुरुवाती दिनहरूमा जग्गाको मुआब्जा दिने भनिए पनि जग्गाधनीसँग कुरा नमिलेपछि करिब ५ वर्षपछि बल्ल जग्गाको बदला जग्गा नै दिने तयारीमा सरकार पुगेको छ । तर यो फाइनल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु पर्ने हुन्छ । ५२ आना जग्गाको विवाद समाधान गर्नका लागि मूल्य निर्धारण समन्वय समिति पनि बनेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५२ आना जग्गाधनीलाई ५ लाख ५० हजारका दरले प्रतिआना दिने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गावालाले नमानेपछि जग्गाको बदला जग्गा नै दिने सहमति भएको छ ।
#Mulpani Cricket Ground
सन्दिप लामिछानेको “उदास थियो यो मेरो मन” गीतको भिडियो रिलिज
रौतहट प्रिमियर लिग घोषणा !!